I-SiC Ceramic Mechanical Seal Faces for Booster Pump China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > I-SiC Ceramic Mechanical Seal Faces for Booster Pump
I- sliced S- ilicone carbide (SSiC) ebizwa ngokuqondile i-sub-micron silicon powbide powder ku-2100 ℃ isithando sokubamba umlilo ngaphandle kokucindezelwa.
Ngoba okuhle crystal uhlaka olulodwa-isigaba salo uyakwazi ukugcina amandla okusezingeni eliphezulu ashisa kakhulu, SS IINHLOKO imikhiqizo ukuzihlambulula okuyisiko okusezingeni eliphezulu futhi high density ukwenza kube babe namandla kakhulu ukugqwala ukumelana kanye ubulukhuni ezehlukile. Izakhiwo ezinhle kakhulu zokugcina zenza kube yi- articularly efanelekayo ekusetshenzisweni kobuso bomshini obunama-ceramic seal, i-valve, i-bearing, i-petroleum, amakhemikhali, i-aerospace, izimboni zezimoto.
Sinesipiliyoni esingaphezu kweminyaka engu-13 se-OEM, i-ODM yokukhiqiza, singasiza amakhasimende ukuklama ubuso be-ceramic seal abenziwe ngokwezifiso noma ukuhlinzeka ngemibono ethile yezobuchwepheshe.
Ngaphezu kwalokho, sinikeza izinhlobo ezahlukene ze-ceramic seal disc for pump, regulators, diverters, kanye mixers.